Exlọ ọrụ na-emenyụ ọkụ na-agbanyụ ọkụ - China Fire extinguish equipments Manufacturers, Suppliers
QXWT50 Mmiri alụlụ usoro (Trolley)
Ngwa O tinyela teknụzụ aerodynamics dị elu site na ngwa injinia mmiri nke metụtara mmiri / gas mepụta iji mepụta sistemụ ikuku mmiri nke QXW. Trolley Nchikota nke egbe di egwu ma obu usoro nke na-eme ka ihe ndi QXW di nma ma dikwa nma maka ijikwa oku. Ngwongwo usoro QXW dị mma bụ ezigbo azịza ọgụ ọkụ maka m na-egwu kol, ụlọ nkwakọba ihe, ebe obibi na ebe a na-ewu ihe ebe a na-echekwa ihe ọkụ na-ere ọkụ ...
QXWT35 Mmiri alụlụ usoro (Trolley)
Ngwa O tinyela teknụzụ aerodynamics dị elu site na ngwa injinia mmiri nke metụtara mmiri / gas mepụta iji mepụta sistemụ ikuku mmiri nke QXW. Trolley Nchikota nke egbe di egwu ma obu usoro nke na-eme ka ihe ndi QXW di nma ma dikwa nma maka ijikwa oku. Ngwakọta usoro QXW dị mma bụ ezigbo azịza ọgụ ọkụ maka m na-egwu kol, ụlọ nkwakọba ihe, ebe obibi na ebe a na-ewu ihe ebe a na-echekwa ihe ọkụ na-ere ọkụ o ...
QXWB-22 Forest Fire Mobile High Pressure Water Mist Fire Extinguishing Ngwaọrụ
1.Product features Jet far Uru nchekwa dị mfe iji ebu Ntuziaka Ọrụ Dị Mfe Ndenye ọkụ ọkụ 2.specification mmanụ ụgbọala mmanụ ike (HP): 1.8 Nrụgide ọrụ (mpa): 5.8 ~ 6.0 Gbara ọkwa (L / min): 4.0 Nkezi oke ( m): 8.0 (atomization) 12.5 (DC) Mmiri akpa mmiri (L): 22 Na-aga n'ihu oge ọrụ kwa akpa mmiri (min): 90 Net arọ (n'arọ): 11.0 Akụkụ (mm): 350x280x550 Akụkụ nke ngwa: Klaasị A , B, C na ndụ akụrụngwa ọkụ. Nhazi: 2 ọkụ ọgụ mmiri akpa, te ...
LT-QXWB16 Akpa akpa eletrik ụdị ezigbo mmiri ọkụ ọkụ na-emenyụ ngwaọrụ
Okwu Mmalite Ngwaahịa a bụ igwe eji agba mmiri nke na - ebute nrụgide nke mmiri mmiri. Mgbe ịchịkwa nrụgide na nrugharị nke mmiri ahụ, a na-agba ya egbe egbe pụrụ iche nke nwere ike iwepụta ezigbo mmiri alụlụ iji gbanyụọ ọkụ ahụ. Enwetara ngwaọrụ gbanwere nwere nchebe dị iche iche dịka nrụgide na mmachi dị ugbu a, nchekwa ụkọ mmiri, na ncheta dị n'okpuru. Usoro a enweghị arịa nrụgide. Ọ na - edozi ihe egwu niile ...
QXWB15Wist mmiri alụlụ (backpacks)
Ngwa O tinyela teknụzụ aerodynamics dị elu site na ngwa injinia mmiri nke metụtara mmiri / gas mepụta iji mepụta sistemụ ikuku mmiri nke QXW. Backpacks Anyị nwere ọkachamara na njikota teknụzụ mmiri mmiri na obere usoro nke nyere ọkụ ọkụ na ikike ọhụrụ gburugburu ụwa. Ngwaahịa ndị a na-ebugharị na-eweta mbelata dị ukwuu na oge nzaghachi, nnweta dị mma na arụmọrụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere aka ịchịkwa ọkụ na mbido mbụ. Akpa azu bu a ...
QXWB12 Mmiri alụlụ usoro backpacks
Mmiri alụlụ usoro mmiri alụlụ ọkụ usoro Asambodo: EN, CE-EN3 CN Coal Mine Safety Certificate; Nnyocha Asambodo Nnyocha paịịl mmiri mmiri na-adaba adaba iji buru maka ndị ọkụ ọkụ ka ha banye ebe ọdachi ahụ mere. Ya mere, ọ nwere ike belata oge mmeghachi omume maka ọkụ ọkụ ọkụ ma belata mmebi Nka na ụzụ Ntucha Extinguishing gị n'ụlọnga Na-ejuputa ikike 12 lita Ihe igwe anaghị agba nchara Nrụ ọrụ Nrụgide 7,5 mmanya Propellant gas kalama Me ...
Akọrọ ike ọkụ extinguisher
Ọnọdụ nrụnye ： Jiri brackets na bolts iji dozie bọọlụ na-emenyụ ọkụ n ’ihe egwu ahụ. Gburugburu ebe obibi: Oke ohia, ulo nkwakọba ihe, kichin, ebe ahia, ugbo mmiri, ugbo ala na ebe ndi ozo oku. Isii njirimara: 1. fechaa na obere: naanị 1.2Kg, mmadụ niile nwere ike iji ya kpamkpam. 2. Ọrụ dị mfe: Naanị tụba bọl na-agbanyụ ọkụ na isi iyi nke ọkụ ma ọ bụ wụnye ya n'ebe ọ dị mfe ịnweta ọkụ. Mgbe ọ hụrụ ọkụ na-emeghe, ọ nwere ike ịkpalite ...
Mobile elu nsogbu mmiri alụlụ ọkụ extinguishing ngwaọrụ
1. Product description Mobile elu nsogbu mmiri alụlụ ọkụ emenyụ ngwaọrụ adabara ọkụ ọgụ na nnukwu omumuihe ogbako, azụmahịa ebe, obodo, ojii, ọwara, ụlọ nkwakọba ihe, igwe ụlọ, square, mwube oru ngo na na. Ngwaọrụ ahụ dị na mpịakọta, dị mfe ịkwaga, nwere ike iru ebe ọkụ ahụ ngwa ngwa, ọrụ ahụ dịkwa mfe ma dịkwa mma. Họrọ mmanụ ụgbọala dị ka isi iyi ike, dị mfe iji ma debe, nwere ike inye ike mgbe niile. High mgbali mmiri alụlụ wat ...
PZ40Y Trolley ụdị ọkara abụọ ụfụfụ generator
Ngwaahịa ● Ọkụ na-ezo aka na ọdachi nke na-esure site na njikwa na oge ma ọ bụ ohere. Na ọkwa ọhụrụ, a kọwara ọkụ dị ka nke anaghị achịkwa oke oge na ohere. ● N’ime ọdachi nile, ọkụ bụ otu n’ime mbibi ndị na-akachasị eyikarị nchekwa ọha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya egwu. Ike ụmụ mmadụ nwere iji ma chịkwaa ọkụ bụ akara dị mkpa nke ọganihu nke mmepeanya. Ya mere, akuko banyere mmadu iji oku na ihe omuma ...
PZ8Y Handheld ọkara ọtụtụ ụfụfụ generator
Aha Handheld ọkara ọtụtụ ụfụfụ generator Model PZ8Y Brand Topsky emeputa Jiangsu Topsky Intelligent Technology Co., Ltd. Foto 1. Okwu Mmalite PZ20YS ejiri aka na-ajụ otutu ụfụfụ generator nwere mma ọkụ na-emenyụ mmetụta na ikewapụ iche. Ọ na-egbochi ikuku na mmiri ọkụ na-ere ọkụ ịbanye na ebe a na-ere ọkụ na elu nke ihe ọkụ ọkụ, ọ na-adịkwa irè karị mgbe ịbelata ịta ahụhụ o ...
MPB18 knapsack abịakọrọ ikuku ụfụfụ ọkụ ngwaọrụ
1. Nkọwapụta ngwaahịa Site na ọganihu ngwa ngwa nke usoro ọgbara ọhụrụ, ọnọdụ ọkụ na-adịwanye mgbagwoju anya. Karịsịa, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mmanụ ala na-ezute ọtụtụ ihe mberede na usoro mmepụta kwa ụbọchị. Ozugbo ihe ọghọm kemịkal dị egwu, ọ na-agbasa na mberede, na-agbasa ngwa ngwa yana ọtụtụ nsogbu. , Enwere ọtụtụ ụzọ nke mmerụ ahụ, nchọpụta adịghị mfe, nnapụta siri ike, na emetọ gburugburu ebe obibi. Na nzaghachi nye nsogbu mberede ...